Qalinka 500 ee Felissimo ayaa loo dhigay walxaha qurxinta | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | Fanaaniin, Dhiirrigelinta, Tricks
Miyaad weligaa u malayn jirtay inaad haysatay qalin badan oo midabbo leh oo ay ceeb tahay in meel lagu kaydiyo ama miiska uun lagu caajiso. Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa waxa a qalin qalin midab leh oo loo sameeyay si loogu soo bandhigo alaabtooda qaab soo jiidasho leh.
Felissimo waa summad aan 1992-kii abuuray uruurinta qalin qalin midab leh adduunka. Waxay ku shaqeysaa iyadoo lagu saleynayo amarro xilliyeed u diraya noocyo guryo ah 20 midab oo ka tirsan palette gaar ah. Waraaqahaani waxay ka kooban yihiin midabbo adag, dhaldhalaalka, dhejiska, iyo midabada birta ah. Waxay ka kooban yihiin 500 oo cutub oo qalin-qaabeeyayaal ah oo midkiiba leh magac dhiirrigelin ah oo ku habboon midabka.
Hal munaasabad si loo muujiyo iyo Abaabulaan alaabtaada sumadda la abuuray saldhigyada loogu talagalay istaraatiijiyadeed si si fudud loogu isticmaali karo. Dhinaca kale, isagoo ah ururinta dhammeystiran, wuxuu rabay inay u shaqeeyaan sidii shey qurxin leh bilic soo jiidasho leh.
Markaad fiiriso shaashadda qalinka ee uu abuuray Felissimo ururinta midabada waxaan arki karnaa sida loogu abuuray inay ugu adeegaan ujeedo urur. Si kastaba ha noqotee, iyaguna way maareeyeen wax soo saar aad u xiisa badan oo isku qurxin ah.
Qalimaanku guud ahaan waa shay luma oo dhaca, taas oo aakhirka dhaawacaysa hogaanka. Intaas waxaa sii dheer, marar badan midabada qaar ayaa joojiya isticmaalka maxaa yeelay ma muuqdaan. Sidaa darteed, sumaddu waxay si taxaddar leh uga fekertay isticmaalka uu macaamilku siinayo. Sidan oo kale, waxay dooneysay inay fududeyso isticmaalka iyada oo loo marayo nidaam u oggolaanaya daawashada iyo helitaanka badeecada si dhakhso leh.
1 Bandhig Faneed
2 Bandhiga Aurora
3 Muuji Wave Midab
Bandhigga ugu fudud «Orchestra» wuxuu noqon karaa darbiga lagu rakibay sida loo doorto isticmaalaha. Tani waxay u oggolaaneysaa qalin qorista in si qumman loo dhex dhigo saldhigyadan jiifka ah ee laysku dari karo.
Soo bandhig midabbo «Orchestra» ah
Aurora waa taagnaan u adeegta in kabadan waxkasta oo lagu muujiyo 500 qalin. U shaqeeyaa sida kiis bandhig ah oo taageera oo ilaaliya waxyaabahan midabada leh nooc bandhig ah. Sidan oo kale waxay ku noqotaa shaqo farshaxan casri ah.
Qalbiyada midabka leh ee Felissimo ee darbiga ku dheggan
Muuji Wave Midab
Bandhigani wuxuu ka kooban yahay qaybo yar yar oo gundhig ah lagu shaqeysiiyo oo qalooca si loo abuuro farshaxan dabiici ah oo qalin leh. Dhinaca kale, waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad doorato inta gogo 'ee aad isticmaali karto, adigoo ku habboon xulashada nooc midab gaar ah si aad ugu awooddo inaad ku daabacdo qaybo midab leh. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad isku soo duubto dhammaan aruurinta si sahlan loo maareeyo.
Hirarka Wave ee qalinka Felissimo
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Qalinka 500 ee Felissimo ayaa loo dhigay qayb ka mid ah qurxinta
Qaab-qorista, kala-sarraynta mawduucyada, iyo farqiga u dhexeeya qaab-qoraalka